से, क्स पा वर बढाउने भि यग्रा कस्तो औषधि ? यसको सेवनले हानी गर्छकी गर्दैन ? - दैनिक नेपाल न्युज
प्रकाशित द्वारा: साेमबार, असार २१, २०७८
काठमाडौं । भि यग्राले से, क्स पा वर बढाउने दाबी गरिन्छ । यसको सेवनले यौ न दू र्वलताको अन्त्य गर्ने विश्वास गरिन्छ । यौ न दू र्वलता भएकाहरुलाई यसको सेवन हीनताबोधको अन्त्य गराउँछ । भिया ग्रााको सेवनले यौ नांगमा हुने रक्तप्रवाहले यसलाई उत्तेजित अवस्थामा राखिराख्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। यौ नेच्छा जाग्छ, तब पुरुषको यौ नांगमा रगत प्रवाह गर्ने धमनी खुल्ला हुन्छ भने रगत फर्काएर लाने शिरा खुम्चिन्छ। यसको परिणाम स्वरूप यौ नांगमा पर्याप्त मात्रामा चाप पैदा भई यौ नांग लामो र कडा हुने बताइन्छ ।
भि यग्राले यौ नांगमा नाइट्रिक अक्साइडको कामलाई बढाउने हुँदा पुरुष यौ नांगको मांसपेशी खुकुलो बनाइदिन्छ। जसका कारण रक्तप्रवाह बढ्न गई यौ नांगको कमलो तन्तु बिस्तारै कडा र दह्रो हुँदै जान्छ । यौ न दू र्वलता भएकाले यौ न सम्पर्क गर्नु आधादेखि चार घण्टाअगाडि बढीमा एक दिनमा एक पटक मात्र २५ देखि सय मिलिग्राम भि याग्रा सेवन गर्न मिल्छ । एक दिनमा यो भन्दा बढी सेवन गरेको खण्डमा नकारात्मक असर पर्छ ।
उच्च रक्तचापको औषधि सेवन गरिरहेका तथा एचआईभीको औषधि सेवन गरिरहेकाले भि यग्रा खानु हुँदैन । मुटुको औषधि खाइरहेका, यौ न सम्पर्क राखेमा हृदयाघातको जोखिममा रहेका, कडा खालको कलेजो तथा मिर्गौलाका रोगी, हालसालै मस्तिष्कघात तथा हृदयाघात भएका व्यक्तिले भि याग्रा सेवन गर्नै हुँदैन। यसैबीच फोक्सोको रक्तचाप बढेमा, उच्च लेकको रोकथाम तथा उपचारमा पनि भि यग्राको प्रयोग भइरहेको पाइन्छ । यद्यपी यौ न दू र्वलता तथा अन्य समस्या भएकाहरुले आफू खुसी भियाग्रा खानु भन्दा चिकित्सको सल्लाह बमोजिम गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ।
उपत्यकाको निषेधाज्ञा थप खुकुलो, यातायातमा जोर/बिजोर हटाइयो